बालुवाटारको जग्गा प्र,हेरकरणमा उम्केका बाबुराम भट्टराई मातातीर्थको १७४ रोपनी जग्गामा तानिने…हेर्नुहोस!
काठमाडौं । बालुवाटारको सरकारी जग्गा हिनामिना प्र,करणमा अ,ख्तियार दु,रुपयोग अ,नुसन्धान आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईलाई उ,न्मुक्ति दिएपछि यसको चौतर्फी आलोचना हुँदै आएको छ ।
स्वयं बाबुरामले पनि सार्वजनिक रूपमै अ,ख्तियारको नि,र्णयको आ,लोचना गरेका छन् । उनले आफूले गल्ती गरेको भए सजाय बेहोर्न तयार रहेको स्पष्टसमेत पारिसकेका छन् ।एउटै क्या,बिनेटले गरेको उही नि,र्णयमा मन्त्रीलाई मु,द्दा चल्ने, तर प्रधानमन्त्रीलाई चोख्याउने अ,ख्तियारको प्रवृत्ति देखिएको भन्दै स,र्वसाधारणसमेत आ,क्रोशित भइरहेका छन् ।
यस्तो अवस्थामा बाबुराम भट्टराई भने काठमाडौंमै बालुवाटारको भन्दा पनि बढी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पारेको विषयमा तानिने भएका छन् ।थानकोट, मातातीर्थ र सतुंगलमा ७८ वटा कित्तामा रहेको नेपाल ट्रष्टको १७४ रोपनी मूल्यवान जग्गा मोही भन्दै व्यक्तिको नाममा कायम गरिएको छ ।
जसको अहिलेको बजारभाउ तीन अर्बभन्दा बढी पर्छ ।व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएका अधिकांश जग्गामा अहिले निजी घर बनिसकेका छन् । २०६९ भदौ २५ गते मन्त्रिपरिषदको नि,र्णय अनुसार ट्रष्टको जग्गा व्यक्तिको नाममा कायम गरेको मा,लपोत कार्यालयको भनाइ छ ।
२०६९ भदौ ११ गते मन्त्रिपरिषदमा नेपाल ट्रस्टका नाममा दर्ता भएका त,त्कालीन राजपरिवारका सदस्यको नाममा रहेका साविकका फर्मायसी वि,र्ता जग्गा स,म्बन्धित मो,हीका नाममा दर्ता गर्ने प्रस्ताव पेश भएको देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले पेश गरेको प्रस्तावमा विधेयक समितिको निर्णयअनुसार गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेको थियो । त्यतिखेर डा.बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री थिए ।नेपाल ट्रष्ट ऐनले ट्रष्टको जग्गाको स्वामित्व मन्त्रिपरिषद्को नि,र्णयबाट ह,स्तान्तरण गर्न मिल्ने अधिकार दिएको छैन । भट्टराईले कानुनविपरीत किन निर्णय गरे ?
यसबारे प्रधानमन्त्री कार्यालय र भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले नेपाल ट्रष्टलाई अझै जानकारी गराएका छैनन् । १७४ रोपनी जग्गा व्यक्तिका नाममा गरिएको निर्णयबारे बाबुरामले अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया जनाएका छैनन् ।
यो विषयमा अ,ख्तियारले अ,नुसन्धान गरिरहेको बताइएको छ । यदि सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गरिँदा आर्थिक लेनदेन भएको फेला परेमा बाबुराम कारबाहीको दा,यरामा पर्न सक्ने स्रोतले बतायो ।